Ndụmọdụ - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Otu esi eme njem na North Korea
Enwere mba kọmunist ole na ole fọdụrụ n'ụwa na otu n'ime ha bụ North Korea. Ajụjụ bụ, enwere m ike ịga nlegharị anya ebe ahụ? Ọ bụghị obodo mepere emepe maka njem. Ị maara na ị nwere ike ịga North Korea? Ee! A na -eche nche mgbe niile, ee, yana ọtụtụ mgbochi ndị ọzọ, mana enweghị mgbagha, ọ ga -abụ njem agaghị echefu echefu.
Omenala ndị America
America bụ nnukwu kọntinent dị iche iche nke ụmụ amaala na ndị kwabatara, ma na ugwu ma na etiti yana ndịda. Mana eziokwu na kedu ihe bụ omenala ndị Amerịka? Ụfọdụ ndụmọdụ bara uru ị ga -eburu n'uche ma ọ bụrụ na ị na -eme njem, maka ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ ihe.
Agwaetiti kacha mma Greek
Otu n'ime ebe kachasị mma n'oge okpomọkụ n'ụwa niile bụ agwaetiti Greek. Lee njem! Enweghị ebe mara mma karị nke na-achọ Mediterranean. Insurance Ọ bụrụ na ị na-eme njem naanị gị, dịka di na nwunye ma ọ bụ dịka ezinụlọ, echegbula onwe gị, enwere agwaetiti Greek maka gị.
Ọgwụ iji gaa Brazil
Ọgwụ mgbochi ịga Brazil bụ ụzọ kachasị mma iji gbochie ọrịa ma nwee ọ andụ njem gị n'enweghị nsogbu
Nnyocha nnwale chọrọ site na mba
Nnwale ndị Covid chọrọ nke mba na-egosipụta enweghị otu. Onye ọ bụla n’ime ha eguzobewo ụkpụrụ na ihe ha chọrọ.
Usoro 7 maka njem ụgbọ ala n'oge oyi
Ugbu a oge oyi abịala, ọ dị ezigbo mkpa ịkwadebe nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-eji ụgbọ ala. Oké ifufe na ...
Mgbe ị ga-azụta tiketi ụgbọ elu
Anyị niile nwere mmasị ịga njem, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị achọta ego ma mee ya obere ego. N'oge ...
Otu esi eji ejiji na Jordan
I kpebiela ịga Jọdan mgbe ọnọdụ ahụike dị na nkịtị. Read na-agụ maka njem nleta ebe, nri, visa, njem na ndị ọzọ ...
Oge ezumike na-abịa! Ndụmọdụ iji chekwaa na njem gị mgbe coronavirus
Mgbe ọrịa coronavirus na-efe efe, oge eruola ịhazi ezumike gị ma chekwaa na njem gị. Want chọrọ ịma ka esi eme ya?
Esi kagbuo ụgbọ elu
Otu uru ị ga-erite ezumike n'oge gara aga bụ ịchekwa ego mgbe ...
Njem ikpeazụ nkeji
Akingga njem njem oge ikpeazụ bụ otu n’ime ahụmịhe na-atọ ụtọ maka globetrotter ọ bụla. Otu ụzọ mgbapụ na ...
Okporo Silzọ Silk
Silzọ Silk bụ otu n'ime ụzọ ndị ama ama na akụkọ ntolite, nnukwu njikọ ụwa ...
Obodo mara mma nke dị nso na Madrid
Madrid bụ otu n’ime obodo ukwu ndị dị na Europe. Ma, dị ezigbo nso na nnukwu obodo, ị ga-ahụ obodo ndị mara mma ị ga-agarịrị.
Dee ndụmọdụ ndị a ma ọ bụrụ na ị ga-aga Vietnam ma ọ bụ na-enweghị visa
Na-aga Vietnam? Mgbe ahụ, ọ dị mkpa na ị ga-eburu n'uche ndụmọdụ ndị a gbasara visa, ịgba ọgwụ mgbochi na ozi ndị ọzọ gbasara mmasị maka njem gị.
Ime ụlọ dị na Galicia, atụmatụ na echiche iji nọrọ
Chọpụta ụfọdụ ndụmọdụ maka ịnọ na ime ime ụlọ dị na Galicia yana ụfọdụ mmụọ nsọ ya na ụlọ ime ime kachasị mma.
Jiri ụgbọ ala gaa Portugal
Ga ụgbọ ala gaa Portugal bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mata obodo agbata obi. Ihe gbasara…
Enwere ugwu sara mbara nke na-agafe ọtụtụ Europe: Alps. Ugwu ya dị ebube na ọtụtụ n'ime ha ...
Ezumike na nkịta
Maka ọtụtụ mmadụ, anụ ụlọ ha na njem ha bụ agụụ mmekọahụ abụọ na o siri ike ịhọrọ n'etiti. N'oge gara aga,…
Otu esi ahọrọ ụlọ ọrụ njem
Anyị na-agwa gị otu ị ga - esi họrọ ụlọ ọrụ njem yana ụfọdụ ndụmọdụ na - adọrọ mmasị nke na - eduzi anyị iku ụdị ọrụ a.
Okwu geek bu neologism na okwu nke ubochi na ojiji ndi ozo nke biara iji choputa ...
Ugwu Ugwu, na Norway
Otu n'ime ihe ndị kachasị mma mara mma ịhụ bụ ihe a na-akpọ ọkụ ugwu ma ọ bụ aurora borealis. Kedu ihe ngosi…
Insurance mkpuchi mba ụwa
Anyị na-agwa gị otu ị ga - esi họrọ mkpuchi njem mba ofesi na mgbe ọ dị mkpa ịzụta otu mkpuchi a.
Onye na-achọghị ịzụ njem? A nwapụtara na njem bụ otu n'ime usoro ọgwụgwọ kachasị mma na ...
Chọrọ iji si Mexico gaa Europe
Ga Mexico na Europe nwere ihe ndị ọhụrụ ọ chọrọ. Chọrọ ịma ihe ha bụ maka njem enweghị nchegbu? Anyị ga-agwa gị!
Kedu mgbe ọ ka mma ileta Madrid
Madrid bụ obodo jupụtara na ndụ, juputara na omume iji mee yana ebe ị ga-efu n'afọ niile….
Kedu otu iwu nhichapụ njem si arụ ọrụ
N'oge a, ọtụtụ mmadụ na-ewe ego ezumike ha tupu oge eruo, na-echebara ihe ndị dị ka ...
Insurance mkpuchi maka njem, ihe ị ga-atụle
Mgbe ị na-eme atụmatụ njem enwere ọtụtụ ihe anyị bu n'uche: ebe obibi, ihe omume, ...
Etu ị ga-esi kerịta ụgbọ ala iji gaa obere
Anyị na-agwa gị ụzọ kachasị mma iji kesaa ụgbọ ala na njem iji belata ụgwọ, yana ngwa ndị na-atọ ụtọ nke na-akwado ọrụ ahụ.
Tiketi na Eiffel Tower
Ifflọ Eiffel bụ kpochapụwo ndị njem na Paris. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịga leta isi obodo France ma ghara ịrịgo ya ...
Ngwa nlanarị na njem gị, ihe ị na-agaghị echefu
N’ikpeazụ ka ezumike ahụ bịara nke ịchọrọ nke ukwuu na nke ukwuu ị kwesiri. Njem ị na-eme atụmatụ maka ọnwa ga-aga ...
Ihe ị ga-achọ mgbe ị na-agbazite ụgbọ ala
Anyị na-enye gị ntuziaka na echiche ole na ole mgbe ị na-agbazite ụgbọ ala, ụgbọ ala kachasị mma maka njem njem.
Paris Pass, igodo ndị njem nleta na obodo
Paris bụ otu n'ime obodo ndị kachasị eleta na ụwa n'oge ọ bụla n'afọ. A ihunanya getaway, a izu ịga ya ngosi ihe mgbe ochie ma ọ bụ na-aga a mmanya na-aga Paris? You na-eche itinye ego na euro ole na ole na ịzụrụ Paris Pass? Mgbe ahụ, gụọ nke ọma, ma eleghị anya ọ ga-adịrị gị ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụghị ...
Camperized van, nnukwu echiche njem
Chọpụta uru na nkasi obi nke nnukwu ogige camper, nke dị mma maka njem izu ụka dị mkpirikpi.
Isi zere ịbụ onye a ghọgburu mgbe ị na-akwụ ụgwọ ụlọ
Iji nọrọ ụbọchị ole na ole, ịgbazite ụlọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị achọ ...
Esi hazie ezumike ezinụlọ
Anyị na-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ gbasara etu esi ahazi na ịhazi ezigbo ezumike ezinụlọ ka mmadụ niile nwee ike ịnụ ụtọ ya nha anya.
Uru nke ntinye akwụkwọ njem tupu oge eruo
Debanye njem tupu oge eruo nwere ike ịnwe ọtụtụ uru nke naanị ndị na-eme atụmatụ maara, dị ka nnukwu nchekwa.
Ọ bara uru ka ịwepụ mkpuchi mkpuchi njem?
Mgbe ị na-ahazi njem, enwere ọtụtụ ihe anyị kwesịrị iburu n'uche: ụlọ nkwari akụ, akpa, njem, na ...
Uwe ndị a ga-ewebata na njem.
Nke a bụ ajụjụ nde dollar nke onye ọ bụla na-eme njem na-ajụ mgbe o chere ihe ịma aka nke mbukota ...
Withoutgbọ elu na-enweghị ebe aga njem dị ọnụ ala
Withoutgbọ elu ndị na-enweghị ebe a ga-enwe ohere iji nwee ike ịga ọtụtụ ebe na mmefu ego pere mpe, na-achọta azụmahịa dị mma.
Egypt bu ebe ndi njem obula no. Otu oge na ndụ gị ị ga-ahụ pyramid na ụlọ arụsị ochie ha dị ndụ. Ofụri Egypt Ọ bụrụ n’ịga n’Ijipt ma mee atụmatụ iso ndị ọzọ na-emekọrịta ihe, ị kwesịrị ịmara ụfọdụ omenala na ọdịnala ha ka ị ghara ịkparị mkparị ma nwee oge dị mma.
Aka akpa na ụgbọ elu, ihe ikwesiri ịma
Akpa aka nwere iwu ụfọdụ na usoro a ga-emerịrị, yabụ ọ dị mkpa ka o doo anya gbasara ihe ọ chọrọ.
Dabere na mpaghara ndịda nke Sierra de Guadarrama, northwest nke Community nke Madrid na n'ime ...
A na-amụba ihe akpụrụ akpụ Jizọs n’obodo ọdịda anyanwụ na nke Ndị Kraịst niile ma mgbe a na-ebuli ha n’elu ugwu ma ọ bụ n’ugwu, ha na-aghọ ebe a ma ama. Otu n'ime njem nlegharị anya okpukpe ndị kachasị ewu ewu na Mexico dị na Guanajato: ọ bụ Cerro del Cubilete na nnukwu ihe oyiyi Kraịst.
Etu esi emeghari paspọtụ
Paspọtụ bụ akwụkwọ gọọmentị nke nwere ikike zuru ụwa ọnụ nke obodo ụfọdụ wepụtara ka ...
Ihe a ga-eme n’ime ime obodo Rocío
Ọ bụrụ na-amasị gị ochie na ọmarịcha obodo na njem uka, ijide n'aka ileta El Rocío, a maa mma Andalusian obodo.
Ọla kọpa Canyon, ịtụnanya canyons na Mexico
Ndi Grand Canyon nke Colorado yiri ka o juru gi anya? Maghị Canyon Canpper! Ha nọ na Mexico ma ha magburu onwe.
Ihe kpatara eji ejighi akpa akpa
Gagharị na-enweghị a akpa enyocha bụ a ọ joyụ, n'agbanyeghị ebe ị na anya. N'ihi na EBIDO, ejegharị ejegharị na dị nnọọ ibu ...
Gaa n'efu dị ka onye ọrụ afọ ofufo
Ga njem n'efu dị ka onye ọrụ afọ ofufo mgbe anyị na-ahụ ụwa ga-ekwe omume, ebe ọ bụ na e nwere mmemme afọ ofufo n'ọtụtụ mba na ozi dị iche iche.
Etu ị ga-esi nweta akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mba ofesi
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mara obodo mgbe ị na-ezumike bụ ụgbọ ala. Nke a na-enye anyị ohere…
Ọgwụ mgbochi ịga Thailand
Na-aga Thailand? Mgbe ahụ ịkwesịrị ịma ihe niile gbasara ọgwụ mgbochi ịchọrọ ịga Thailand ma ghara ịrịa ọrịa.
Kedu akwụkwọ asambodo mba ụwa?
N'agbanyeghị ihe kpatara njem gị, a ga-emerịrị ihe iji lebara ahụike anyị anya. Karịsịa mgbe…
Otu esi ahazi gburugburu ụwa
Na mbụ, ọ nwere ike ịdị ka echiche nzuzu nyere ịdị ukwuu nke njem ahụ, mana ịgagharị na mbara ụwa na-eleta ọtụtụ ndị ...
Gaa na Santiago de Compostela nke Camino del Norte
Nzọụkwụ nke Camino del Norte, otu n'ime Caminos de Santiago, na-adọrọ mmasị ma na-agba ọsọ n'akụkụ ụsọ oké osimiri Cantabrian, na mpaghara mara mma na obodo mepere emepe.
Ndụmọdụ maka njem naanị
Agbanyeghị na mbụ ọ nwere ike inye ụfọdụ ikike, ọkachasị ndị njem na-enweghị uche, eziokwu bụ na naanị njem nwere ike bụrụ ...
Otu esi enweta visa maka Australia
Otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya na mpaghara Eshia na Pacific bụ Australia. Obodo a mara mma kemgbe ...
Japan Rail Pass, Japan na aka gị
Inweta gburugburu Japan dị mfe site na Japan Rail Pass. Egbula! Gbọ oloko, bọs, ụgbọ mmiri, ihe niile ga-abịa ma gafere nnukwu mba a.
Otu esi eme atụmatụ na ịnụ ụtọ njem ụgbọ ala
Inweta njem ụgbọ ala nwere ike ịbụ ihe na-atọ ọchị ma na-atọ ụtọ, mana ị ga-elebara ihe ole na ole anya mgbe ị na-eme atụmatụ ya.
Kedu otu esi ahọrọ mkpuchi mkpuchi njem kachasị mma?
Mgbe anyị na-ahazi njem, enwere ọtụtụ ihe anyị ga-ebu n'uche: njem, ibu, nkwari akụ, njem mmụta ...
Kedu ihe bụ 'ezumike ezumike ọrụ' na gịnị kpatara anyị ji nwee mmasị na ya?
N'isiokwu nke taa anyị na-agwa gị ihe Visa 'Ezumike Ezumike' bụ na ihe kpatara anyị ji nwee mmasị ịmara ya ndị niile chọrọ ịga njem na ịrụ ọrụ.
Kedu otu esi enweta paspọtụ mberede?
Ọ bụ ezie na anyị akwadebela njem tupu oge eruo iji zere ihe ndị a na-atụghị anya ya, mgbe ụfọdụ ihe nwere ike ime ...
Hakone, njem site na Tokyo
Na-aga Tokyo ma chọọ ịhụ Ugwu Fuji? Mgbe ahụ gawa na Hakone, ihe na-erughị 100 kilomita: oke ọhịa, ndagwurugwu, craters, mmiri na-ekpo ọkụ, ugwu na n'ezie, Fuji.
Kwadebe atụmatụ gị na snow na ụmụaka
Kwadebe maka afọ ọzọ atụmatụ gị iso ụmụaka gaa snow. Ezumike ezumike maka ezinụlọ dum na ebe ezumike.
Ihe ịga leta Algeria
Na-amasị gị Africa? Mgbe ahụ ị ga-agarịrị Algeria na ihe ịtụnanya ya: nkà mmụta ihe ochie, akụkọ ntolite, ogige mba, ọzara, ugwu na osimiri mara mma.
Kedu ihe ị chọrọ ịma iji gaa safari na Africa?
Ga na safari n'Africa bụ otu n'ime ahụmịhe kachasị echefu echefu na ndị njem ọ bụla. Ama m…
Ebe kacha mma iji nọrọ n'oge ekeresimesi na Asia
Onweghi ihe di ka akuku Esia iji gbaa ekeresimesi, mana ebe kachasi nma bu South Korea, China na Japan Agbula ha!
Ozi bara uru maka ịga na South Korea
Nwee usoro gị na South Korea nke na-echere gị site na ogwe aka. N'ezie, tupu ị gụọ ntuziaka a na ozi kachasị mma gbasara ihe ị kwesịrị ịma.
Kedu ka esi enweta ọdụ ụgbọ elu VIP?
Mgbe ị na-eme njem, ọkachasị mgbe anyị ga-aba ụgbọ elu na-ejikọ iji ruo ebe anyị na-aga, ogologo ...
Ogwe kachasị mma na Buenos Aires
Mgbe ị na-aga Buenos Aires akwụsịla ị na-aga n'ụlọ mmanya ka ịdee ndepụta nke ogwe ndị kasị mma na Buenos Aires, echefula ha!
Mba 5 kachasị dị ize ndụ ịga njem naanị
Agbanyeghị na oge mbụ na - enyekarị nsọpụrụ, njem naanị bụ otu n'ime ahụmịhe ndị ị ga - ebi ...
Ndụmọdụ 6 maka ihi ụra ogologo ụgbọ elu
Ọbụna ma ọ bụrụ na ụgbọ elu nke ị gafere maka ezumike ezumike gị nwere usoro ntụrụndụ ...
Njem nlegharị anya dị na Island Island
I chere na ịga Easter Island bụ ihe dị oke ọnụ? Bibie echiche ahụ. Easter Island ma ọ bụ Rapa Nui bụ paradaịs enwere ike ịnweta yabụ tinye akpa gị ma nwee obi ụtọ.
Kedu ihe bụ ikike m dị ka onye njem ma ọ bụrụ na m kwụsị ụgbọ elu m ma ọ bụ gbue oge?
Mgbe anyị gara ọdụ ụgbọ elu iji ụgbọ elu, ọ nwere ike ịbụ na ọ na-egbu oge ma ọ bụ kagbuo. Bụ…
Ndụmọdụ iji kwadebe akpa akwa gị maka njem
Chọpụta ụfọdụ ndụmọdụ na-atọ ụtọ iji kwadebe akpa akwa maka njem anyị na-eme, yana ihe niile ịchọrọ na ihe dị mkpa.
Otu esi eme atụmatụ njem maka ndị agadi
Chọpụta otu ị ga-esi mee njem maka ndị agadi, na-eche maka obere nkọwa ka ha nwee ike ịnụ ụtọ ezumike ha.
Otu esi eme njem otu izu na otu akpa ebu
Na edemede nke taa, anyị gwara gị otu esi ejegharị otu izu na otu izu. Maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Otu esi ahọrọ ụdị ụlọ obibi mgbe ị na-eme njem
Chọpụta ụfọdụ echiche banyere otu ị ga - esi họrọ ụdị ebe obibi kwesịrị ekwesị maka njem ahụ yana nhọrọ niile dị taa.
Ndụmọdụ maka ịnụ ụtọ ngwụsị izu
Chọpụta ụfọdụ ndụmọdụ iji nwee ọ aụ ngwụsị izu na oge ọ bụla, nwee nnukwu echiche maka ịga njem.
Usoro 8 iji chekwaa oge na njikwa ọdụ ụgbọ elu
Mgbe ọ bụla anyị ga-efe ụgbọ elu, anyị ga-eche nche na ọdụ ụgbọ elu, usoro na-agwụ ike nke gụnyere ...
Ndụmọdụ maka ịga na mma kacha mma nke Beijing
Na-aga Beijing? Obodo a machibidoro iwu, Nnukwu Mgbidi na Mausoleum nke Mao bụ ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha, ya mere dee ndụmọdụ ndị a iji nwee obi ụtọ na ha.
Jiri nwayọ na ụgbọ ala gị na anụ ụlọ gị gaa njem
Taa, anyị na-ewetara gị usoro nke ndụmọdụ na aro iji gaa n'ụgbọ ala anyị na anụ ụlọ anyị n'enweghị nsogbu. You chọrọ ịma ha?
Ndụmọdụ iji zere nsi nri na ezumike
N'oge nke afọ a, njem na mba ofesi na-adịkarị, ọkachasị ebe ndị dị anya ma na-adịkarị mma. Detuo ...
5 ezigbo ụlọ ahịa kọfị na Bruges
Mgbe ị gara Bruges were ezumike maka nri ụtụtụ ma ọ bụ tii na otu n’ime kọfị 5 ndị ​​a mara mma: kọfị, tii, achịcha, chọkọletị, chọkọletị.
Isegbọ njem, ndụmọdụ bara uru
Ing njem site na njem bụ ahụmịhe ọhụụ, yabụ na anyị ga-ama ihe ole na ole tupu oge eruo. Anyị na-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ bara uru.
Ndụmọdụ bara uru maka ịga Rome
Obodo Rome bụ ebe na-adọta ọtụtụ puku ndị njem nleta kwa afọ, ọ bụghịkwa ihe ijuanya ...
Mmụta si Bangkok
Na-aga Bangkok? Dozie ụbọchị ole na ole maka njem mmụta si na Bangkok: mkpọmkpọ ebe, ahịa, ụlọ arụsị na oke osimiri.
Ndụmọdụ na ihe kpatara eji etinye ego azụ
Chọpụta ụfọdụ ihe kpatara ya yana karịa ndụmọdụ ole na ole iji nwee ọ tripụ njem njem njem, ahụmịhe ọhụụ.
Kedu mgbe ọ dị ọnụ ala karịa ileta osimiri kachasị mma n'ụwa?
Oge ezumike ezumike na-abụkarị otu akụkụ osimiri, anyanwụ, oké osimiri na mmanya n'akụkụ osimiri. Nnyocha dịgasị iche na-egosi na ọ dịkarịa ala otu ...
Na-ezube iso ụmụ gị na-enwe ezumike
Nwee atụmatụ dị iche iche iji soro ụmụaka nwee ezumike. Ndị a bụ ezigbo atụmatụ ma ọ bụrụ na anyị ga-aga njem dị ka ezinụlọ.
Ngwa 5 bara ezigbo uru maka ezumike oge ezumike gị ọzọ
Teknụzụ ọhụrụ emeela ka ụzọ anyị si agagharị na-eme ka ọ dịkwuo mfe ma dịkwa mfe. Anyị ama bụ ...
Otu esi elekọta ahụike ezinụlọ n'oge njem ahụ
Chọpụta ụfọdụ echiche iji lekọta ahụike nke ezinụlọ n'oge njem ahụ. Ọ dị mkpa iburu n'uche ọbụna obere nkọwa.
Njem site na Emirates, Fly Emirates
You fere ofufe ka ị ga-efe efe ka ọ ga-amasị gị iji ụgbọ elu Emirates? Ọ bụ otu n'ime ụgbọ elu kachasị mma n'ụwa wee chọpụta ihe ọ dị, nke ọma na nke ọjọọ.
Kedu nọmba nọmba visa m?
Ntuziaka ịchọta nọmba Visa na paspọtụ ma ọ bụ visa, akwụkwọ dị mkpa iji gaa mba ndị ọzọ. Know maara ka esi enweta ya?
Ndụmọdụ iji nweta ụgbọ elu dị ọnụ ala karịa
Taa, anyị na-eweta usoro nke iji nweta ụgbọ elu dị ọnụ ala karịa. 5 na mkpokọta nke ga - abughi naanị gị ego ma oge.
Ndụmọdụ iji soro nkịta gị gaa njem gburugburu ụwa
Anyị na-enye gị ndụmọdụ ole na ole maka iso nkịta gị na-eme njem gburugburu ụwa, echiche ndị nwere ike ime ka ọ dịrị gị mfe isoro ezumike gị na ezumike gị.
Ndụmọdụ maka ịnụ ụtọ njem ogologo ụgbọ elu
Mgbe oge ọkọchị rutere, ọtụtụ na-amalite ezumike ha a na-eche anya ogologo oge. Fọdụ na-aga n'ebe ndị dịpụrụ adịpụ na-aghaghị ime mgbanwe iji ...
Atụmatụ maka backpacking ụgbọ okporo ígwè njem
Chọpụta ụfọdụ ndụmọdụ na uru dị na njem ụgbọ oloko, njem nke na-ewu ewu, mana ọ nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma.
Ndụmọdụ iji mee ọtụtụ ụgbọ elu dị ogologo
Anyị na-enye gị ndụmọdụ ole na ole iji mee ka ogologo ụgbọ elu dị ogologo. Zọ kachasị mma iji were awa niile n'ụgbọelu.
Are na-aga London n’oge anwụ a? Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụ ụtọ ya, ịnwere ike ịgbanahụ obodo Brighton, Portmouth, Salisbury, Whitstable ...
Ndụmọdụ iji nwee obi ụtọ na ezumike gị n'ụsọ osimiri
Chọpụta ụfọdụ ndụmọdụ dị mfe iji nwee ọ yourụ ezumike gị ọzọ n'ụsọ osimiri. Echiche iji kwadobe ihe niile ma ghara iju gị anya.
N'oge ọkọchị na Berlin, ihe ị ga-eme na otu esi enwe ọ .ụ
Are na-aga Berlin na ọkọchị? Ọ na-agbawa ndụ mgbe ọ na-ekpo ọkụ ya mere dee ihe ị nwere ike ime: igwu mmiri na ọdọ mmiri ma ọ bụ ọdọ mmiri, rie n'èzí, gaa mkpagharị ...
Ihe mere ị ga-eji na-eme njem ugboro ugboro
N’isiokwu Sọnde nke taa anyị nyere gị ihe ise mere ị ga - eji eme njem ọtụtụ oge, ole ka ịchọrọ ọzọ? Ebee ka iga ozo?
Ndụmọdụ maka ileta Ghibli Museum na Japan
Ọ bụrụ na ọmasị ndị Japanese na-amasị gị, ị maara Hayao Miyazaki. Na Tokyo, jide n'aka na ị gara Ghibli Museum, ụwa nke ebube!
8 ihe ị na-ekwesịghị ime mgbe ị na-eme njem ụgbọ ala
Echiche nke isoro ndị otu enyi merie ụzọ bụ njem na-atọ ụtọ. Ọ bụla…
Ndụmọdụ iji chekwaa n'oge ezumike
Anyị na-enye gị ụfọdụ aghụghọ iji nwee ike ịchekwa mgbe ị na-eme atụmatụ na ịnụ ụtọ ezumike ọzọ, na ebe ọ bụla.
Ndụmọdụ maka ịgbazite ụgbọ ala n'oge ezumike gị
Chọpụta nkọwa niile ịchọrọ ịma iji gbazite ụgbọ ala n'oge ezumike gị, site na ịhọrọ ụlọ ọrụ mkpuchi.
Languedoc, ọkọchị na France
Oge okpomọkụ na-abịa. Ichetara banyere ndịda France? Languedoc na-enye omenaala, akụkọ ihe mere eme na oke osimiri. Ọ ga-abụ oge ọkọchị zuru oke.
Ihe ị ga-eme na San Francisco
Egbula mara San Francisco! Inggafe Ọnụ Goldenzọ Goldenmá Golden, ileta Chinatown na Halllọ Nzukọ Obodo ma ọ bụ ịgagharị n'okporo ámá ya na tram ga-adị mma.
Etu ị ga-esi mee njem izu ụka
Chọpụta ụfọdụ echiche bara uru iji hazie izu ụka izu ụka gị nke ọma. Obere njem anyị nwere ike ịhazi ngwa ngwa.
Ebe nkiri na Sydney nke ị na-agaghị echefu
Are ga-aga Sidney? Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke ịme ihe: gbagoo Bridge, kayak ma ọ bụ ụgbọ mmiri, na ibugo onu. Mụọ amụ!
Gagharị na anụ ụlọ gị ga-ekwe omume
Withgagharị na anụ ụlọ gị ga-ekwe omume taa na anyị achọtala ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ihe gbasara usoro na ebe obibi enyere ya.
Ihe niile ịchọrọ ịma iji gaa Tibet
El Tibet na-amasị gị? Mgbe ahụ mee atụmatụ njem gị nke ọma ma mara ihe niile gbasara visa na ikike pụrụ iche ị ga-aga njem n’elu ụlọ ụwa.
Ndụmọdụ na ndụmọdụ ahụike gbasara ebe dị iche iche 3 (II)
Isiokwu nke taa bụ n’ihu nke ụnyaahụ. Anyị na-abịaghachi na ndụmọdụ na ndụmọdụ ahụike maka ebe 3 dị iche iche (II): India, Arabia na Jordan.
Mbugharị bụ nchụpụ nke ọnụ ọgụgụ mmadụ, nke na-esite n’otu obodo sitere n’obodo ọzọ wee na-aga ebe ọzọ Kedu ụdị njem mmadụ dị?
Aro na ndụmọdụ ahụike maka ebe 3 dị iche iche
Taa, anyị na-aga karịa maka nsogbu ahụike na ihe kachasị agwụ ike nke njem ma anyị ewetara gị ndụmọdụ na ndụmọdụ ahụike maka ebe 3 dị iche iche.
5 Cruises na ụfọdụ ndụmọdụ ịnyagharịa nke a 2017
Isesgbọ mmiri bụ nhọrọ ezumike dịka nke ọ bụla ọzọ. Na a dịgasị iche iche nke ntụrụndụ na ohere nke ịga ...
Devon, ọkọchị Bekee
You chọrọ inwe ezumike oge ezumike bekee? Mgbe ahụ gaa na Devon: castles, cliffs, osimiri, ochie obodo, biya.
Ihe ị ga-eme mgbe ị na-eche ụgbọ elu
N’isiokwu Satọde a, anyị na-enye gị usoro nke ihe ị ga - eme mgbe ị na - eche ụgbọ elu n’ọdụ ụgbọ elu. Ikwu good to boredom.
Interrail: ozi ọma na Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na Europe
Ruo ogologo oge, Interrail bụ ụzọ ndị na-eto eto ga-esi mata ọdịbendị ndị ọzọ wee si otú a malite usoro ọmụmụ ha ...
A naghị anabata ndị bi gburugburu ụwa ebe anaghị anabata ndị nleta
N’isiokwu nke taa, anyị ewetara gị ebe 5 gburugburu ụwa ebe anaghị anabata ndị nleta. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, gụọ iji chọpụta ihe ha bụ.
Ndụmọdụ na echiche maka njem naanị
Anyị na-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ bara uru maka ịgagharị naanị na ụwa, ihe ndị mmadụ na-eme karịa na nke nwere ike ịbụ ahụmịhe dị egwu.
3 mara mma French castles na ị nwere ike amaghị
Anọla ebe obibi nke Loire. Chọpụta ndị ọzọ mara mma ma ọ bụ karịa. Ndị a bụ ndị amachaghị na ndị magburu onwe ha.
Atụmatụ bara uru iji gaa ọnụ ala
Chọpụta ụfọdụ ndụmọdụ bara uru iji mụta otu esi eme njem dị ọnụ ala karịa afọ a. Otu esi achota ulo na ebe obibi na ezigbo ego.
A njem Iran, ebe obibi nke mmepeanya
Iran bu ebe anwansi choro ma oburu n’acho uzo na igha ebe di iche iche, gaa maka ya. Lee ị nwere ozi bara uru iji mee ya.
Igodo iji chekwaa njem
N'isiokwu a anyị na-eweta ụfọdụ igodo iji chekwaa njem, ọkachasị ụzọ ise ndị njem na-ejikarị eme.
Nhọrọ dị ọnụ ala maka njem
N'isiokwu a anyị na-agwa gị otu esi eme njem n'ụzọ akụ na ụba na nhọrọ ndị a dị ọnụ ala ịga: ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ elu, ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ibi na ndị ọzọ, wdg.
You ma ihe bụ njem ịchụ nta bụ? Ọ bụ ihe siri ike ịhapụ aha mana ọ bụrụ na m gwa gị ...
Ego Asia: Yen na Shekels
Anyị na-egosi gị ego dị iche iche nke Eshia ugbu a ka ị nwee ike ịiche ọdịiche na ịkewa ha n'enweghị nsogbu.
Kedu uwe na ihe ndị ọzọ ị kwesịrị iji were ụgbọ mmiri?
Ọ bụrụ na ezumike ezumike gị ọzọ ga-anọ na nnukwu ụgbọ mmiri, ebe a anyị na-agwa gị ụdị uwe na ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ịnwe.
Otu esi eme njem na anụ ụlọ, nkọwa na ozi
Withgagharị na anụ ụlọ bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-eme taa, ebe ọ bụ onye ọzọ so n'ezinụlọ, yabụ ị ga-ama etu esi eme ya.
Ndụmọdụ maka njem maka oge mbụ na njem ụgbọ mmiri
Ọ bụrụ na ị ga-eme njem maka oge izizi na njem ụgbọ mmiri, echefula ndụmọdụ ndị a dị mkpa maka ịnụ ụtọ nke ọma.
Otu esi eme atụmatụ njem, echiche ndị bụ isi
Anyị na-enye gị echiche ndị bụ isi ịhazi njem nke ọma, site na njem gaa ebe obibi na obere nkọwapụta na ebe ị na-aga.
Ihe 7 ọ dịghị onye gwara gị banyere Camino de Santiago
Kemgbe ụwa, njem ọtụtụ ebe dị nsọ abụrụla ọtụtụ okpukpe. Itzọ njegharị ndị a nwere ihe ha pụtara ...
Boracay, ebe kachasị mma na Philippines
Chọrọ osimiri kacha mma na Philippines? Gaa na Boracay!
Ezumike ezumike na Sardinia
Dee ozi a na ndụmọdụ iji nwee obi ụtọ na Sardinia na akpa gị n'ubu gị.
5 bara uru ngwa ga-eme ka njem gị dị mfe
Otu n'ime ihe ụtọ kachasị mma na ndụ bụ njem. Mara n'akụkụ ụwa niile na-enye anyị ohere inweta ahụmịhe ...
Ebee ka mkpọmkpọ ebe nke oge ochie dị?
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ akụkọ ihe mere eme n'anya, ochie, ịmata ihe mere na ebe ụfọdụ, edemede a ...
Ndụmọdụ na ndụmọdụ ọ bụrụ na ọ bụ njem njem mbụ gị
Iwere njem na-abụkarị ihe kpatara ọ joyụ, ọkachasị ma ọ bụ maka oge ezumike ma ọ bụghị maka ọrụ, nkwa ...
Oke Osimiri Baltic 2016
Ka nwere oge iji dee akwụkwọ njem na Oke Osimiri Baltic! M na-ahapụrụ gị ụfọdụ onyinye na ndụmọdụ iji mara ndị a magburu onwe aga.
Ndụmọdụ maka iso ụmụaka eme njem
Anyị na-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ maka iso ụmụaka eme njem, iji mee ka ọ bụrụ nnukwu ahụmịhe maka ezinụlọ dum chọrọ ịmeghachi.
A na-enwe oge mbụ maka ihe niile, ọbụlagodi ife efe. Ọ bụrụ n ’ụgbọ elu mbụ ị ga-efe n’oge na-adịghị anya, isiokwu a nwere ike ịba ezigbo uru.
Ihe omuma banyere Eastern Europe
Chọrọ ịga njem ma chọọ inwe ọtụtụ ozi dịka o kwere mee gbasara Eastern Europe? Tinye isiokwu anyị ebe anyị na-ekpughe ihe nzuzo ya niile.
Ihe na-eme gị mgbe ị na-eme njem
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na - eme gị mgbe ị na - eme njem: Ọ dị gị ka ị maara ha niile, ma ọ bụ ikekwe ọ bụ naanị ụfọdụ?
Esi esi rụọ ọrụ nke ọma maka njem
Oge ezumike dị n'akụkụ nkuku ma soro ha gaa ezumike n'akụkụ osimiri, gaa ...
Japan ndu ndu, njem, nri, ahịa, shopping
Japan na-amasị gị mana ị chere na ọ dị oke ọnụ? Mba, enwere ike ịnweta ya ma ọ na-echere gị, yabụ dee ndụmọdụ na ozi a iji gaa ma nwee ọ !ụ!
Zọpụta na mgbazinye ụgbọ ala gị ezumike a
Goga site n'otu ebe ruo ebe ọzọ na-enweghị ịdabere na onye ọ bụla dị ebube, ọ dị mma? Leba anya na ndụmọdụ ndị a iji chekwaa ego na mgbazinye ụgbọ ala gị.
Ndụmọdụ iji lụsoo ọrịa elu ugwu
Ọrịa dị elu dị egwu ma ọ bụ soroche bụ aha enyere mmeghachi omume ahụike nke ahụ mmadụ n'ihi nsonaazụ ...
Kaadị njem nleta Paris ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị?
Enwere kaadị ezumike njem nleta maka onye njem ọ bụla na-aga Paris, olee nke ga-abụ nke gị? Chọpụta, chekwaa ego ma nwee ọ !ụ!
Usoro asaa iji gaa ụwa mgbe ị na-arụ ọrụ
Ezumike abụghị naanị ụzọ isi hụ ụwa ma ọ bụghị mgbe niile ka ịchekwaa nnukwu ego iji ...
Netwọk mmekọrịta isii iji nọrọ n'efu na ụwa
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịgagharị n’ ụwa ka ị zute ndị mmadụ ma ị nweghị ego ị ga - echekwa, ihe kachasị mma bụ iji netwọkụ mmekọrịta ndị a maka ebe obibi n’efu ma gawa!
Ndụmọdụ ị ga - eji nweta ụgbọ mmiri
Isesgbọ mmiri bụ nhọrọ ezumike dịka nke ọ bụla ọzọ. Otú ọ dị, maka ọtụtụ ndị mmadụ njem site n'oké osimiri bụ otu ...
Kedu ebe ogige ọkọlọtọ isii kacha mma na America?
Chọpụta nke kachasị mma ọkọlọtọ isii ka ị gafere na United States. Nnukwu ihe ndị na-agba ọsọ na-apụta maka ịdị elu ha na ọsọ ọsọ ha.
Onye kacha mma nke Ecuador: Pailón del Diablo
Pailón del Diablo bu mmiri mmiri na Osimiri Pastaza nke di na Ecuadorian Andes di nso na obodo Baños de Agua Santa
Kedu mgbe ụlọ ngosi ihe mgbe ochie New York na-akwụghị ụgwọ?
Anyị nwere ekele maka ịdị adị nke ebe ngosi ihe mgbe ochie na-akwụghị ụgwọ gburugburu ụwa. Ọ dị mma, ọ bụ nnukwu echiche. Ka emechara…
Ahụmahụ ise na Japan ị na-ekwesịghị ịhapụ
Ọ bụrụ n’ị na-aga njem na Japan, a na m akwado ka ị biri ndụ ise ndị a anaghị echefu echefu
Ikike ndị njem ụgbọelu
Ọ bụrụ na ịmaghị ikike nke onye njem site na ụgbọ elu, ị nọ na ebere nke ụgbọ elu na-ekwu ụdị nsogbu ọ bụla. Chọpụta ikike gị ebe a.
Ngwa kacha mma maka njem
Chọpụta ngwa kacha mma iji njem, site na ngwa iji chọta ụgbọ elu na ndị ọzọ iji nyere anyị aka na njedebe, na-achọ ebe ị ga-eleta.
Bịanụ ọ excụ nke Holy Week na Vatican
Ndụ mmụọ nke emefu Holy Week na Vatican
5 njikọta ihe oriri ga-enyere gị aka na njem gị
Ee, anyị nọ na nsogbu; ee, enwere ndi pere mpe na ndị pere mpe ndị n’enweghị ike ị nweta “okomoko” nke ime njem ...
Ozi iji mee ememme izu ụka 2016 na Jerusalem
Ozi na ọnụahịa iji mee Ememme Nsọ na Jerusalem
Kedu ihe nchọta ọchụchọ njem kacha mma
Mgbe anyị ga-eme njem ọ bụla, ma ọ bụ maka oge ezumike ma ọ bụ azụmaahịa, anyị na-eme otu usoro ahụ mgbe niile: Anyị na-agbanye ...
Ndụmọdụ maka ileta Iguazu Falls 2016 a
Dee ndụmọdụ ndị a ka ị gaa na Iguazu Falls na 2016
Ozi banyere otu esi aga Iceland
Ozi bara uru banyere otu esi aga Iceland, site na ụgbọ elu, ụgbọ mmiri
Ihe niile ị chọrọ ịma njem na anu ulo
Mmadụ isii n’ime ezinụlọ iri ọ bụla nwere anụ ụlọ na Spen. Na ngụkọta, ihe karịrị anụmanụ nde 16 na n'ọtụtụ ...
Kedu ihe a ga-ebu na akpa?
Ga-eji ụgbọelu mee njem? Nwere ike ibute nri n'ụgbọ elu? Chọpụta ihe ị nwere ike iburu ma ọ bụ na ị gaghị ebu na akpa gị na ndị nke nwere ike ịmalite mkpu.
Nwee Valentpo bypo site na ifegharị na balloon n’elu Madrid
N'ụbọchị Valentine, gbagoo na balloon na-ekpo ọkụ na Madrid wee nwee ọ theụ
Ndụmọdụ bara uru maka ịgagharị na mba ọzọ
Na-eme atụmatụ ịgbapụ mba ọzọ? Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ bara uru ị ga-ebu n'uche mgbe ị na-aga njem.
Gagharịkwuo, ebumnuche maka 2016
Dee ihe ndị a na ndepụta nke mkpebi gị: "Gaa njem ọzọ, ebumnuche maka afọ 2016." Naanị otu a ka ị ga - eto dịka mmadụ ma nweta ahụmịhe.
Ndụmọdụ bara uru maka njem enweghị nchebe
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ bara uru maka njem dị nchebe ma dị nchebe. Echefula na ịhazi njem ọ bụla tupu oge eruo na-egbochi anyị ịtụnanya dị njọ.
Mba ndị kasị dị ize ndụ maka njem nleta
Ministri nke Ofesi na-ewepụta ndepụta nke mba ndị kachasị dị ize ndụ maka njem. Ọ bụrụ na ị ga-eme njem n’oge na-adịghị anya, chọpụta ebe a.
Obodo ndị dị ize ndụ na America
Na nke a, anyị ga-anọgide na-ama nke bụ mpaghara ndị kasị dị ize ndụ na United States ka ị wee nwee ihe ọmụma gbasara ihe ị nwere ike ịchọta
Osisi, Otu n’ime Negbè Ndị Dị Oké Mgbu na America
N’agbata njem anyị na-agabiga ebe ụfọdụ dị egwu na United States, anyị rutere Woodside, agbata obi na South Carolina.
Imirikiti gara na ebe nrụọrụ weebụ na-eme njem nleta
Oge a ka anyị ga-ewebata gị ebe nrụọrụ weebụ ndị njem nlegharị anya nke ime obodo. Na mbu anyi huru ...
Kedu magazin njem kacha mma?
Oge a ka anyị ga-achọpụta nke kacha mma njem magazin. Ka anyị bido site n'ikwu banyere National Geographic Traveler, magazine ...
Keeway Superlight 200: Ezigbo Mgbapu Chopper nke China maka Ọgba Mgba Ala
Njem ọgba tum tum bụ otu n'ime obi ụtọ kachasị mma maka ndị na-enwe mmasị na adrenaline.
Top Ngwa iji gaa Rome
Oge a ka anyị ga-ewebata gị n'usoro kachasị dị mkpa iji gaa Rom. Ka anyi bido site n'ikwu banyere Katie Parla's ...
Agwọ na Bali
Na Bali enwere agwọ, anyị nwere ike ịchọta otu ma ọ bụ na ọ bụghị ihe niile bụ ihe ọdịmma.
Anyị chọpụtara na Tokyo 'n'okporo ámá nke yakitori'
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị njem ahụ na-achọ ịpụ na njem ọdịnala maka ndị njem, pụọ na etiti ahụ wee chọpụta akụkụ ...
Aghụghọ iji were foto dị mma n'akụkụ osimiri
Oge ọkọchị dị ezigbo nso ma okpomọkụ na-ekpo ọkụ na-akpọ gị òkù ka ị gaa n'akụkụ osimiri iji tan na izu ike ...
Ofzọ nke Transportgbọ njem Maritime
Transportgbọ njem ụgbọ mmiri bụ nke ga-eme ka anyị nwee ike ịgafe mmiri, nke ...
Paragliding: Adventure Sport nke na-enye anyị ohere ife efe
Taa, anyị ga-eme paragliding, egwuregwu nke na-enye anyị ohere isi na ọnụ ọnụ gafee site na ...
Agwaetiti Hvar, Ibiza nke Kroeshia.
A na-ewere ya dị ka otu n'ime agwaetiti kachasị nwee mmekọahụ, tinyere Hawaii na Bahamas, agwaetiti ahụ ...
Netherlands: a ga-amachibido ịre ndị na-eme njem mmanya na 'ụlọ ahịa kọfị' mmanya
Iwu nke ịnagide ọgwụ ọjọọ bụ otu n'ime ọtụtụ ebe nkiri Netherlands na-enye ndị njem nleta, na mgbakwunye ...
Ndị na-ahazi njem na ntanetị kacha mma
N'oge a anyị ga-ekwupụta ụfọdụ ngwa ọrụ bara uru n'ịntanetị maka ndị njem. Ka anyị bido site na ịkwado njem na ọ bụghị ...
Royal Caribbean: Ezigbo Nhọrọ maka Singles Cruises
Ọ ga-amasị gị ịme njem naanị gị wee soro gị laghachi? Ọ bụrụ na ị nweghị onye ọ bụla, ma ị na-achọ ụlọ ọrụ, mgbe ahụ ị ga-enwe mmasị ịmara ...
Ihu igwe nke Lima: Ihu igwe na isi obodo Peruvian
Oge a anyị ga-aga Peru, mba dị na South America, amaara ụwa niile maka inwe otu n'ime ...
Agwaetiti Comoros: Ozi Izugbe, Omenala na ịmata ihe
Ka anyị bute akpa anyị ma hazie njem gaa na otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa. Anyị…
Ntụle maka ịrụ ọrụ na Irughari
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị hụrụ ụgbọ njem na ị chọrọ ịga ụwa site ...
Lake Geneva: Ime njem na ime njem na Switzerland
A mara mma ebe ị na-ekwesịghị ileghara n'oge njem gị njegasi na Switzerland, ọ bụ ịrụ ụka adịghị a ...
Ememme Salsa n’ụwa
Salsa bụ ụdị egwu a na-agba egwu na Latin America, mana ọkachasị na Caribbean. Nnyapade a nke meriri ...
Omenala nke ndi Italy
Otu n'ime ihe ndị kacha ewu ewu na ndị istali bụ mmụọ ha, ha na-anụ ọkụ n'obi ma na-egosipụta oke. Ha bụ mmadụ…
Ationgbọ njem na Lima
Obodo Lima jikọtara ya na ndị ọzọ nke mba ahụ site na Central Highway na Pan-American Highway. Ebe ọ bụ na…
Agua de Cacao, ihe ọ drinkụ drinkụ nke Acapulco
A maara na amaara Mexico na ụwa maka osimiri ya na ndụ abalị ya. Otu n'ime ihe ọ drinksụ drinksụ ahụkarị ...
Ihe omimi nke Jamaica
Jamaica, ewezuga ọmarịcha osimiri ya, nwekwara ụfọdụ ebe okike ndị a ga-ahụrịrị. N'ime ha bụ: ...